HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA86 ChinaProjet Road Generation, 40 hamonjy olona an-tapitrisany amin'ny fahantrana
Projet Road Generation, 40 hamonjy olona an-tapitrisany amin'ny fahantrana
06 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA 0
hamonjy olona an-tapitrisany amin'ny fahantrana ny tetik'asa
Araka ny fanadihadiana navoakan'ny Banky Iraisam-pirenena, ny tetikasan'i Shina sy 2013 nampidirin'ny hetsika Belt and Road dia olona 7 tapitrisa 600 tapitrisa any amin'ny firenena tafahoatra, ny 32 tapitrisa olona hanaisotra ny fahantrana ambany. Hampiakatra ny 2,8 ho 9,7 isan-jaton'ny isan-jotra ara-barotra amin'ireo firenena mpandray anjara. Amin'ny varotra eran-tany, ny 1,7 mankany 6,2 dia hitombo ary ny vola manerantany dia hiakatra amin'ny 0,7-2,9. Hatramin'izao, ny firenena 136 dia nanao sonia handray anjara amin'ity fandraisana andraikitra ity…
Cumhurbaşkanı Silk Road Economic Belt "sy" 2013. Namboarina nandritra ny fitsidihan'ny filoha sinoa Xi Jinping nankany Azia Afovoany sy Azia atsimo atsinanana tamin'ny fararano 1. Ny 6 dia lasa vokatra iraisana izay noraisina an-tsokosoko amin'ny sehatra manerantany.
Ny fandraisana andraikitra, izay i Xi Jinping dia mandinika manokana ny fankalazana ny tsingerin-taonan'ny 70 any Shina, dia nanamafy ny fifampatokisana ara-politika, ny firaisankina ara-toekarena ary ny fifandraisan'ny olombelona sy ny kolontsaina eo amin'ireo firenena voakasik'izany.
Tamin'ny faran'ny Jolay, 136 dia nandray ny isan'ireo firenena nanao sonia fanamarinana fiaraha-miasa miaraka amin'i Shina ao anatin'ny rafitry ny Generation and Road; nitombo ho 30 ny isan'ireo fikambanana iraisam-pirenena. Ny tetikasa koa dia nosoratana tamin'ny fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana nandritra ny lohatenin'ny inşa Building ny fiaraha-mientan'ny maha-olombelona.
Torkia tsara ao am-pon'ny napetraka ny tetikasa
Miatrika fitakiana maro samihafa avy amin'ny firenena tandrefana, fiaraha-miasa Belt sy Road, Afrika Atsinanana, ny làlana voalohany, ny tetezana Maldives voalohany eo ambonin'ny ranomasina, i Belarus dia manana ny fanamboarany fiara. Ny fampidirana ny lalamby Mombasa-Nairobi dia nanampy ny teboka 50 ho an'ny fitomboana ara-toekarena ao Kenya, ary namorona asa 1,5 arivo tapitrisa ao amin'ny faritra.
Vorontsiloza eo amin'ny sehatry ny fifanarahana nosoniavina amin'i Shina in 2015 dia tafiditra tao ny fehin-kibo Road Project. Amin'izany toe-javatra izany, mitohy ny asa natao ho an'ny Bridge Sty Çanakkale, 3 Storey Tube Crossing Project, Filyos, Çandarlı ary Mersin fanamboarana fiaran-dalamby ary Edirne-Kars.
Mikendry ny hampifandray an'i Azia, Afrika ary Eropa ny tetikasa; Anisan'izany ny fampiasam-bola an'arivony tapitrisa dolara amin'ny fotodrafitrasa, ao anatin'izany ny lalambe, lalamby, seranan-tsambo ary andalana fampitana herinaratra. 21. taonjato ary nofaritana ho iray amin'ireo tetikasa fampandrosoana lehibe indrindra miaraka amin'ny hetsika Belt and Road; ny fananganana sy fampidirana fifandraisan-davitra fitaterana, fifandraisan-davitra, angovo sy angovo hafa ao amin'ireny faritra ireny, ny fampindramam-bola sy ny renivola ho an'ny tetikasa vaovao, ny fomba amam-panao ary ny fandrindrana hetra eo amin'ny faritra sy ny varotra sy ny fampiasam-bola hitranga ka havaozina.
Belt sy Road Project 25 / 05 / 2019 Tetik'asa Belt & Road: Nampiantrano ny International Transport Forum (ITF) tao Leipzig, Alemana i Turhan ary namaly fanontaniana tao amin'ny fandaharam-potoana. Turhan, Torkia, ny ITF dia nanangana asa ao amin'ny sehatry ny fitaterana dia mpikambana ao izany satria, ary Tena zava-dehibe ny fivoriana, hoy izy. Raha mahatsiaro fa ny lohahevitry ny sehatra tamin'ity taona ity dia ny fametrahana ny làlam-pifamoivoizana, nilaza i Turhan fa nanao fifandraisana manan-danja tao anatin'ny seha-pifanakalozan-dresaka izy ary nanao kabary momba ny fitaterana, ny fampitam-baovao ary ny famerenana angovo. Nitohy toy izao i Turhan: "Tamin'ny taona 15 farany teto amin'ny firenena dia nanao tetikasa tena lehibe izahay teo amin'ny sehatry ny fitaterana. Nohazavainay ireo, nanaraka ny tombontsoan'ny rehetra, ny fanalahidin'ny hetsika Generation and Road ...
Belt iray One Road Project Zavatra Tombontsoa ny mpandraharaha Shinoa any Torkia 01 / 07 / 2019 Shina miliara dolara lalamby tetikasa, izay nanomboka ho 'taranaka Lalana iray', dia nitodika ny sain'ireo Shinoa mpandraharaha an'i Torkia. Railway tetikasa satria ny hany Tiorkia tetezana ho any Eoropa mba hitsidika mpandraharaha Shinoa nanomboka vola amin'ny faritra maro any Torkia. Tamin'ny volana lasa ny filohan 'ny fanorenana orinasa izay mihazakazaka ny 40 arivo ny olona rehefa manao fikarohana ho an'ny fampiasam-bola any Torkia, Noely dia tonga tao Soho Istanbul Textile mpitantana. Ao amin'ny 350 Septambra 500-toetra mpandraharaha Shinoa vondrona, dia tonga tany Torkia mba hanadihady ny fampiasam-bola fahafahana. Shinoa vondrona manam-pahaizana nentina tany Torkia, dia hoy izy antokon'olona toy izany dia tsy liana amin'ny arivo tapitrisa dolara tetikasa amin'ny tsy raharaham-barotra boky. Torkia indrindra avy amin'ity volana ...
Fifanarahana momba ny fiaraha-miasa amin'ny 118 izay voasoratra ao amin'ny tetikasa Generation and Road 28 / 08 / 2018 Ny fifanarahana fiaraha-miasan'ny fikambanana 118 dia nampiasaina tamin'ny tetikasa Generation and Road: Nandritra ny taona dia nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasan'ny 5 teo amin'ny firenena 103 sy ireo fikambanana iraisam-pirenena sy Shina momba ny tetikasa "Generation and Road". Ning Jizhe, Filoha lefitry ny Leadership Group momba ny Fikarohana siantifika sy fandefasana fiantsoana, dia nanao ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety momba ity lohahevitra ity androany ao Beijing. Hatramin'ny fanombohana ny hetsika 'Belt and Road', dia nilaza i 118 fa nisy fandrosoana goavana natao tamin'ny tetikasa fiaraha-miasa marobe nandritra ny taona maro. Nanipika fa ny fananganana ny orinasa ara-toekarena Sino-Pakistani dia mandeha tsara, hoy i Ning fa ny fanamboarana lalamby an'i Sino-Laos, Sino-Thailand sy Hongria-Serbia dia miorina tsara.
Anatin'ny 'taranaka tokana tokana' 20 / 04 / 2019 Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Minisitra Cahit Turhan, "One Belt One Road Tetikasa" amin'ny manaraka vanim-potoana, nanamarika fa Torkia dia vao mainka hampitombo ny maha zava-dehibe ny jeografia anisan'izany ny ao amin'ny "Anatolia, ny Kaokazy sy Azia Afovoany telozoro fitaterana ao amin'ny antonontonony mba hahatratra ny maro amin'izao fotoana izao ny toe-karena habeny." hoy izy. Minisitra Turhan, hoy ny fanambaran'i, 17 tato anatin'ny taona vitsy, ny firaketana an-tsoratra Torkia fitomboana haingana, fanondranana-mirona famokarana ary ho foana hampitombo ny varotra boky. Ao amin 'ny sehatry ny fitaterana Torkia, Azerbaijan sy Afovoany sy Atsimo Azia faritra mba handrisika varotra amin'ny Turhan dia nanazava fa ny manan-danja indrindra fitaovana, nanindry mafy izay mitondra feo ao amin'ny maneran-hevitry ny dingana noraisina ao amin'io faritra io. Turhan, ...
Ny 'Win-Win' Belt sy Road Initiative 23 / 05 / 2019 M. Cahit Turhan, Minisitry ny Fitaterana sy ny Infrastructures, dia nanambara fa ny Belt and Road Initiative, izay antsoina koa hoe The New Silk Road, dia heverina ho toy ny fandraisana andraikitra lehibe amin'ny tanjona hampifandraisana an'i Azia, Eoropa, Afrika ary Amerika Atsimo. Girişim Ny tetikasa, izay mandrakotra mihoatra ny firenena 65 manerana izao tontolo izao, dia tetikasa goavana iray mitàna ny faritra manodidina ny 40 tapitrisa kilometatra kilaometatra sy ny 4,5 miliara amin'ny mponina manerantany. Noho izany antony izany dia zava-dehibe ho an'ireo firenena izay mandray soa avy amin'ny fiarahamonin'ny bilateral, sy ny sehatra iraisam-pirenena ary ny fampitam-baovao mba hanatanterahana io tetik'asa io miaraka amin'ny fomba fandresena 'mandresy'. " Forum Iraisam-pirenena Transport maneho Mpanao fanompoam-pivavahana Torkia Turhan (ITF), Alemaina ny ...
TCDD Taşımacılık A.Ş. Fitsidihana fifampiarahabana nahitana ny tompon'andraikitra ankapobeny
TÜMOSAN Nifindra tany amin'ny famokarana serial ny fitaovam-pifandraisana an-trano sy nasionaly Diesel
Belt iray One Road Project Zavatra Tombontsoa ny mpandraharaha Shinoa any Torkia
Ny 'Win-Win' Belt sy Road Initiative
Ny lalam-be mahaliana mahaliana indrindra ho an'i Istanbul!
Ny mahaliana indrindra amin'ireo tetikasa izay hamonjy Istanbul dia ny fiara fitaterana!
Ny Metrobus natao hamonjy an'i Istanbul dia novokarina tany Dresden, Alemana
Metro, mponina ao Gaziantep dia hamonjy amin'ny fanakanana ny fifamoivoizana
Ny Konak Tunnels 10 dia handany vola isan-taona